इण्डियन प्रिमियर लिगमा सन्दिपकाे टिम खेल्दै, उनकाे संभावना कति ? - Nepal Cricket
इण्डियन प्रिमियर लिगमा सन्दिपकाे टिम खेल्दै, उनकाे संभावना कति ?
इण्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आईपीएलमा आज पनि २ वटा खेल हुने भएका छन् ।
नेपाली समय अनुसार अपरान्ह सवा ४ बजे चेन्नाई सुपरकिंग्स र कोलकता नाइटराइडर्स तथा राति सवा ८ बजे सनराईजर्स हैदरावाद र दिल्ली क्यापिटल्स भिड्ने छन् । पहिलो खेलमा भिड्ने चेन्नाई तालिकाको शीर्ष स्थान रहेको छ भने कोलकता ८ अंकका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।
आजको खेलमा चेन्नाई विजयी भए दोस्रो स्थानमा रहेको कोलकतालाई ६ अंकले पछि पार्ने छ भने कोलकता विजयी भए दोस्रो स्थानमा रहँदै २ अंकले पछि पर्ने छ । दोस्रो स्थानमा रहेको कोलकताले आजको खेलमा अलि दबाव महशुस गरेको छ ।
लगातार दुई खेलमा पराजित भएको कोलकता हारको श्रृंखला अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रने छ । तर कोलकतालाई आन्द्रे रसेल अस्वस्थ भएकाले उनी खेल्नेबारे अन्योलता बढेको छ ।
लगातार ६ खेलमा ४० भन्दा माथि रन बनाएका रसेल चोटग्रस्त भएकाले उनी खेल्ने विषयमा अझै केही भन्न नसकिने जनाएको छ । चेन्नाई भने ७ मध्य ६खेलमा जित निकाल्दै उच्च फर्ममा रहेको छ ।
महेन्द्रसिंह धोनीको कप्तानीमा रहेको चेन्नाई उच्च फर्ममा रहेकाले कोलकतासँगको खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो खेलमा ‘कुल कप्तान’को नामले चिनिने धोनीले एम्पाएरसँग असन्तुष्ट हुँदै मैदान भित्र प्रवेश गरेपछि उनको चर्को आलोचना भएको छ । उक्त घटनापछि उनलाई ‘म्याच फी’ को ५० प्रतिशत जरिवाना लगाइएको छ ।